Qorattoonni Ingliziifi Gaambiyaa saroonni dhukkuba busaa akka adda baafatan beeksisan - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Once Upon a Pixel
Saroonni foolii fuudhuu qofaan dhukkuba busaa akka adda baafachuu danda'an qorattoonni Ingliziifi Gaambiyaa beeksisan.
Qorattoonni kunneen uffata nama dhukkuba busaan qabamee akka saroonni foolii fuudhan/fuunfatan taasisuudhaan ji'oota dheeraadhaaf leenjisaniiru.
Keessattuu Afriikaafi Eeshiyaatti dhukkuba busaa lubbuu namoota baayyee balleessu ittisuudhaafi dhabamsiisuudhaaf carraaqqii akka addunyaatti taasifamu keessatti argannoon kun ga'ee ol aanaa akka qabu ibsameera.
Sadarkaa yaaliirra kan jiru ta'ulleen dhukkuba busaa qorachuudhaaf akka tooftaa haaraatti tajaajiluu ni danda'a.
Qorannoowwan akka agrsiisanitti yeroo busaadhaan qabamu namni fooliin isaa kan jijjiiramu yommuu ta'u bookeen busaa ammoo foolii kana waan jaallataniif nama busaan qabe dhiiga isaa xuuxanii dhukkuba kana dabarsu.
Amma ammoo saroonni foolii kana fuufnachuudhaan dhukkuba busaa gargaaruu danda'u.
Gareen qorattoota kanaa kaalsii daa'imman Gaambiyaa 'Happer Riiver' jiraatan walitti qabanii gara Ingilizitti erguun ture qorannoon kun kan jalqabame.
Kaalsiiwwan 175 ergaman keessaa 30 kan ta'an kan daa'imman dhukkuba busaan qabaman kan uffatan ture.
Madda suuraa, LSHTM
Ijoollee kaalsii godhatan
Saroonni kunneen kaalsiiwwan ijoollee dhukkuba busaan qabamanii adda baasuu danda'anillee, ijoollee keessaa tokko garuu osoo dhukkuba busaan hin qabamiin akka waan qabameetti fudhataniiru.
Kun ammoo saroota kana hanga dhumaatti leenjisuu waliin walqabata.
Dursaa garee qorannoo kanaa kan ta'an Piroofeeser Istiiv Liindiisey bu'aa qorannoo kanaatti hedduu gammadanii yeroodhaff saroonni kunneen tajaajila qorannoorra akka hin jirre dubbataniiru.
Saroonni kunneen hanga dhukkuba kana guutummaan guutuutti adda baafatanitti itti fufanii akka itti fufanii leenjisan himanii dhukkuboota biroo akka adda baafatan taasisuufis akka hojjetan dubbatan piroofeeser Istiiv.
Sadarkaa yaaliif ammoo bakka namoonni itti heeddumaatan akka buufata xiyaaraatti saroota bobbaasuudhaan bu'a qabeessummaa isaa sakatta'uuf akka yaadanis dubbataniiru.
Pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakroon filannoo naannoorratti kufan